shaqooyin aan faaiido doonka ahayn iyo sida loo noqon agaasimaha fulinta aan faa'iido-a | USAHello | USAHello
Sidee loo agaasimo aan faa'iido fulinta
Ma waxaad xiiseynaya in shaqooyin aan faaiido doonka ahayn iyo ururada? Ujeedada ururadan waa in dunida si fiican halkii ay lacag sameeyaan. faa'iidada Non noqon kartaa qof keli ah ama ciidan caalami weyn. Agaasimayaasha Fulinta keeni shaqaalaha hay'adda, gool set, oo dusha hawlgallada. Raadi wax ku saabsan shaqooyinka aan faaiido doonka ahayn iyo tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay qaataan si ay u noqdaan Agaasimaha Fulinta.
Waa maxay shaqooyinka aan faaiido doonka ahayn? Waa maxay doorka agaasimaha fulinta?
Waxaa jira ururo badan oo duniduna ma ay-faa'iido-doon, oo ay bixiyaan kumanaan shaqo aan faaiido doonka ahayn. Magacyada kale ee urur aan faa'iido doon ah waa urur aan dawli ahayn (NGO), hay'adda iskaa wax u qabso, adeega bulshada, iyo samafal. ururada intaas oo dhammu waxay u shaqeeyaan si ay u caawiyaan dadka ama dunida ka fiican in hab qaar ka mid ah si ay u sameeyaan. Iyagu ma jiraan in ay lacag sameeyaan. Sar- waa in kor loo qaado lacagta ay u baahan yihiin barnaamijyo, dhacdooyinka, iyo hawlaha kale ee. Dhamaan iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin madaxda weyn si ay u toosin.
“Fulinta” ka dhigan tahay qorshe ridaya tallaabo. Agaasimaha A waa qof maamula wax nooleeya tilmaamaha. shaqo agaasimaha fulinta waa in ay hubiso in aan faa'iido ma waxa loogu tala galay in la sameeyo iyo guulaysto. Agaasimaha A urur aan faa'iido doon ah oo ku hadla oo ku hadlaya magaca ururka, kicisaa lacag, samaysanayso qorshaha mustaqbalka, qabataa kulan oo u yeelaan waajibaadka shaqaalaha.
About shaqooyin aan faaiido doonka ahayn
Maxaad ka fili kartaa in shaqada of agaasimaha fulinta?
Waajibaadka ah agaasimaha guud
Agaasimayaasha Fulinta waa sida maamulayaasha of ganacsi. Waxay leeyihiin waajibaadka badan oo ay leeyihiin si ay u kormeeraan wax walba oo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah waajibaadkooda:
Qorsheeyaan oo dhigay miisaaniyadda sannadlaha ah ee ururka
Abuuraan fursado shaqo iyo siyaasadaha maamulka
In la dhiso iyo in ay xiriir la sameeyaan hay'adaha kala duwan
Sheeg oo si dhow ula gudiga maamulka inaad gaadhid go'aamo ku shaqeeyaan
Ilaali, la shaqeeyaan xubnaha shaqaalaha ee ururka
Samee qorshaha istiraatijiyadeed oo lagu fulinayo
Dusha urur Board iyo kulamada guddiga
Dusha suuq-geynta iyo dadaalka kale ee isgaarsiinta
Dib u eeg iyo ansixiyaan heshiis ah ee adeegyada
Inta badan shaqooyinka aan faaiido doonka ahayn, ay ka mid yihiin Agaasimaha fulinta ee, ka dhacay xafiis. Laakiin dadka ku jira shaqo faa'iido aan wax badan u safri laga yaabaa in. Agaasimayaasha Fulinta safraan si kor loogu qaado ururkooda, lacag kor u, ama ha ka shaqeeyo berrinka. Waxay ka shaqeeyaan laga yaabaa in saacadaha dheer.
Mushahar shaqo aan faaiido doonka ahayn
Mushaharka shaqo faa'iido aan kala duwan oo ku salaysan size ee ururka iyo waayo-aragnimo qofka iyo waxbarashada. celceliska mushaharka agaasimaha aan faa'iido ah waa $63,824. Waa wax badan ka yar shirkad faa'iido-doon ahayn mushahar agaasimaha celceliska ee.
Waa maxay nooca qofka ka dhigaysa agaasimaha wanaagsan faa'iido aan fulinta? Waxay u muuqdaan in ay noqon bulsho isku weyn oo dunida. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tayada kale iyo xirfado aad u baahan tahay lahaa.
madaale - Agaasimayaasha shaqeeyaan saacado badan oo ay leeyihiin si ay u awoodaan si ay u sii wado marka qof kasta oo kale ayaa guriga tegey
xalinta dhibaatada - maamulayaasha iyo agaasimayaasha waa in ay dadka ku aragto oo aad eegto dhibaatooyin la xiriira hab ee iyaga qamaar
anshaxa wanaagsan - Agaasimayaasha waa ka masuul ah oo ku saabsan sida ay u isticmaalaan lacagaha iyo daacad ah in isgaarsiinta ay noqon
kartida si ay u falanqeeyaan macluumaad - shaqo aan faa'iido doon ahayn waxaa ka buuxa xogta ay ku jiraan macluumaad adag iyo xeerarka
abuurista iyo dayactirka miisaaniyad
hogaanka iyo maamulka
lacag ururin iyo isgaarsiinta
qorshaynta istaraatiijiga ah
Ka soo baxday shaqooyin aan faaiido doonka ahayn
Waa maxay tababarka, shahaado iyo waayo-aragnimo sameeyo Agaasimayaasha fulinta u baahan tahay?
sar- intooda badan waxay u baahan yihiin agaasimayaasha fulinta si ay u leeyihiin shahaado sare oo duurka ku ah shaqada. Fursada kale waa Master degree ah Maamulka Dadweynaha (MPA). MPA The qalma dadka xirfadda in aan = maamulka faa'iido, dawladda, ama adeeg kale oo Dawladeed,. Koorsooyinka waxaa ka mid ah maamulka samafalka iyo kuwo dhaqaale, hoggaanka, iyo qorshaha istaraatiijiyadeed.
Si kastaba ha ahaatee, Agaasimayaasha badan waxaa loo tababaray in ay beeraha kale. Tusaale ahaan, oo amiir u ahaa NGO deegaanka laga yaabaa in saynisyahan a. Hogaamiyaha hay'ad samafal ah caawinta carruurta jirran ayaa laga yaabaa in bilaabay in maamulka caafimaadka ee isbitaalka carruurta, ama sida xirfadle caafimaad.
Waxaa suurto gal ah si aad u hesho MPA internetka ah halka aad ka shaqayso oo ay helaan khibrad leh aan faa'iido-. Waxaad ka raadin kartaa online dugsiyada la Programs MPA.
Waxaa jira dhowr caddeyn aad ka heli kartaa adigoo ku biira barnaamijyada tababarka hoggaanka. ururada aan faa'iido badani waxay bixiyaan barnaamijyo hanuunin iyo hoggaanka in ay shaqaalaha. Haddii aad u shaqeyso faa'iido aan horay, ka qeyb qaadanaya mid ka mid ah barnaamijyadan wayn ayaa kaa caawin kara.
Tabaruciddu waa hal hab si aad u heshid waayo-aragnimo. Iskaa wax urur aan faa'iido doon ahayn in kulan aad rumaysantahay iyo gool ah. Waxaad heli doontaa aqoonta iyo waayo-aragnimo cusub. Marka aad leedahay waayo-aragnimo, waxaad bilaabi kartaa isticmaalkiisa si aad u hesho shaqo mushaari ah. muddo dheer waxa uu noqon doonaa ka hor inta aadan ku kici kartaa in Agaasimaha Fulinta, laakiin waxaa jira shaqooyin badan oo wanaagsan jidka ururada aan faaiido doonka ahayn.
Romana Lee-Akiyama iftiimay waaxda doon ahayn
Baro shaqooyinka maamulka la mid ah
Baro wax badan oo ku saabsan maamulayaasha adeega bulshada
Sidee si ay u noqdaan fulinta a top